काठमाडौं । सरकारले यही फागुन महिनाभित्र कोभ्याक्स सुविधामार्फत कोभिड–१९ विरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप ल्याउन अन्तिम तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्ने गरी कोभ्याक्स सुविधामार्फत खोप ल्याउन लागेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले आफूहरुले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले फागुन अन्तिमसम्म कोभिसिल्ड खोप ल्याउन थालेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २० प्रतिशतलाई दिइने भनेको खोप कोभ्याक्सले एकैपटक नभई पटक–पटक पठाउने छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स (गाभी)लगायत संस्थाले निम्न आय मुलुक भएका देशलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कोभिसिल्ड खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएकोले नै कोभ्याक्सले सोही खोप पठाउन थालेको हो । यसअघि, नेपालमा उक्त खोप लगाउन थालिएको छ । भारत सरकारले उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप गएको माघ १४ गतेबाट लगाउन थालिएको हो । सरकारले अहिले स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई खोप दिइरहेको छ ।
केही दिनअघि मात्र सरकारले कोभिसिल्ड २० लाख मात्रा खोप किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त खोप केही हप्तामा आउने उनले बताए । सोही किनेको खोप यही फागुन २३ गतेदेखि ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई लगाइने भएको छ ।
यस्तै, चीन सरकारले पनि सरकारलाई पाँच लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । चीनले ‘भेरोसिल’ नामक खोप उपलब्ध गराउने भनेको छ । उक्त खोप औषधि व्यवस्था विभागले समेत सूचीकृत गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणको खोपअन्तर्गत दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई आगामी सोमबारसम्म खोप लगाइने भएको छ । आजसम्म मात्र खोप लगाइएकाले थप दुई दिन खोप लगाउने समय बढाएको खोप शाखाका प्रमुख डा. गौतमले जानकारी दिए ।
अहिले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी, वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, पत्रकार र अग्रपंक्तिमा काम गर्नेले खोप लगाइरहेका छन् । उनका अनुसार अहिले तीन लाख ८४ हजारजनाले खोप लगाइसकेका छन् । रासस